ZayYarHlaing: March 2010
step 1 ... clean the DVD first to remove dust.
after that, put on the small piece of dark blue cloth.
step2... useadrinking straw with my thumb over one end to dispense some water drops in the way i want them arranged on the back ofaDVD in and around the rainbow effect.
step3... set my camera on the tripod.
step4... set my camera setting in M mode with
Shutter Speed :- 1/3s
Aperture :- f/22
step4... try to focus water drop on the DVD.
step5... shoot.
not use any flash. used my room lighting only.
သူတို့ တွေအိမ်ပြန်ကြပြီဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ခဏနားခိုရာကိုပြန်ပြီ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ တစ်ကယ့်အိမ်ဆိုတဲ့နေရာကိုပြန်ရဖို့ ဆိုတာကတော့ ... ။
နေညိုချိန်၊ တိမ်တောက်ချိန်၊ နွားရိုင်းသွင်းချိန်၊
ကိုကို၊ ဦးဦးနဲ့ တစ်ချို့ သောဖိုးဖိုးများ လေပျိုချိန်၊
ကြိုက်သလိုတင်စားဗျာ ... လှတာကတော့တအားပဲဗျာ။
မနေ့ က Singapore မှာတစ်နေကုန်ကိုမိုးရွာတယ်ဗျာ။
ဒါနဲ့ ပဲဒီ Image လေးတွေကိုရှုဖို့idea ရသွားတာပါ။
ကျွန်တော်ရှုခြင်တဲ့ idea ကအပေါ်မှာမြင်ကြတဲ့အတိုင်းအမှောင်ထဲမှာဖြစ်နေလို့ ပါ။
ဒီလိုနဲ့ ပေါ့ဗျာ ... ကျွန်တော်လိုခြင်တဲ့အမှောင်ကြီးစိုးတဲ့အချိန်လဲရောက်ရော၊
camera ရယ၊် tripot ရယ်၊ ထီးရယ်၊ LED ဓါတ်မီးရယ်ကိုယူပြီးအိမ်အောက်ကိုဆင်းတော့တာပဲဗျာ။
ကျွန်တော် camera ကိုင်ပြီဆိုရင်၊
အခန်းထဲကအတူနေသယ်ရင်းတွေကလန့် လန့် နေကြတယ်ဗျ။
လိုခြင်တဲ့အမှောင်အနေအထားကတော့ရပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ လိုခြင်တဲ့ မိုးသည်းမှုကတော့မရတော့ဘူးဗျ။
camera ကို tripot မှာထောင်၊ setting ကို M Mode မှာ ...
Shutter Speed ... 10s
Aperture ... 8
ISO ... 200 မှာထားချိန်လိုက်တယ်ဗျာ။
Aperture ကို 8 ထားရတာကတော့ မိုးစက်လေးတွေကိုသေခြာပေါ်စေခြင်လို့ ဗျ။
ဒါနဲ့ ပဲ Aperture ကို 4.5 ပြောင်းလိုက်တယ်ဗျာ။ မိုးစက်တွေလိုခြင်သလိုမရမဲ့အတူတော့၊
ချောမောလှပတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ အခွက်ကိုပဲရအောင်ယူလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ ပေါ့ဗျာ။
ဟဲဟဲ ...။ ကဲစပြီဗျာ။ လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကတော့ ....
step 1 ... camera ကို tripot မှာထောင် setting ကို M Mode မှာ၊
Aperture ... 4.5
ISO ... 200 ထား။
step2... LED အဖြူရောင်ဓါတ်မီးကို အလင်းအရမ်းစူးပြီးကျမနေစေပဲ၊
ပြီးတော့ ထီးကိုဖွင့်၊ ထီးရွက်နဲ့ အနီးဆုံးထီးရိုးမှာ LED ဓါတ်မီးကို တွဲပြီးချည်။
step3... မရမကခေါ်ချလာတဲ့သယ်ရင်းကို object တည်မဲ့နေရာမှာခဏရပ်ခိုင်း၊
သယ်ရင်းရဲ့ မချောမောမလှပတဲ့အခွက်ကို focus ဖမ်း၊ လိုခြင်တဲ့ focus မိပြီဆိုတော့မှ
camera မှာ focus ကို M ကိုပြောင်းပြီး focus lock လုပ်။
step4... camera ကို timer setting ပြောင်းပြီး timer ပေး၊
LED ဓါတ်မီးကိုဖွင့်၊ ထီးကိုကိုင်ပြီး ခုနကသယ်ရင်းကိုရပ်ခိုင်းခဲ့တဲ့
( သယ်ရင်းရဲ့ ပုံကိုမရှုပဲ၊ ကျွန်တော့်ပုံကိုကျွန်တော်ပြန်ရှုရတာကတော့၊
ကျွန်တော်ပေးမဲ့ photo title name ကြောင့်ပါ။ ပြီးရင်အဲ့ဒီ image တွေကို
ချစ်သူစီပို့ ပေးပြီး၊ သနားအောင်လုပ်အုံးမှာလေ။ ဟီး ... အကြံကအဲ့ဒီလို ... )
step5... ရလာတဲ့ image ကို Photoshop ပေါ်တင်၊
ကဲ ... ဒါပါပဲဗျာ။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ ချစ်သူရဲ့ နှစ်လုံးသားကို ကိုင်လှုပ်နိုင်မဲ့၊
ကျွန်တော်တို့ တွေအားလုံး ...
ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားအချိန်ပေးပြီးရှာဖွေတွေ့ ရှိထားတဲ့နည်းပညာများနဲ့ 
အတွေ့ အကြုံများကို၊ ဒီနေရာလေး ကနေမျှဝေကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
M Mode မှာ Shutter speed က 20s ၊ Aperture က f/5.6 ၊ ISO က 400 ပါ။
step2... အခန်းမီးကိုပိတ်၊ camera ကိုမျက်နှာမူပြီးသွားရပ်၊Led 1W
အဖြူရောင်ဓါတ်မီးကို ready ကိုင်ထားပြီး၊ ကို night ကြီးပေးလိုက်တဲ့
remote ကလေးကိုသုံးပြီး click လိုက်တယ်။
step3... click ပြီးတော့စိတ်ထဲကစပြီးအမှတ်စဉ်မှတ်တယ်။
၁..၂..၃..၊ ၃ လဲရောက်ရော၊ ဓါတ်မီးကိုဖွင့်၊ ဓါတ်မီးကထွက်တဲ့ Light
step4... ပြီးတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ဓါတ်မီးကိုကောက်ကြောင်းလေးတွေအတိုင်းအမှတ်စဉ်မှတ်ပြီး၊ဖြည်းဖြည်းခြင်းဆွဲတယ်။
ထားထားတဲ့ shutter speed က 20s ဆိုတော့ အမှတ်စဉ် ၃ ကနေစပြီးဆွဲလိုက်တာ၊
အမှတ်စဉ် ၁၅ မှာရပ်လိုက်တယ်။
( အမှတ်စဉ် ၃ ကနေစပြီးအမှတ်စဉ် ၅ မှာရပ်လိုက်တာဟာ၊ ဒီ image တစ်ခုထဲအတွက်
သယ်ရင်းတို့ စိတ်ကြိုက်ကဘယ်လိုဖြစ်မယ်တော့မသိပါဘူး။ စမ်းကြည့်ကြပေါ့နော်။ )
step5... ပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးရပ်နေလိုက်တယ်။ ဒါပါပဲ။
မြင်ရတဲ့ပုံအတိုင်းရတယ်ဗျာ။ ဘာဆိုဘာနဲ့ မှလဲမပြင်ထားဘူး။ ဘာအမျိုးအစား Flash ကိုမှလဲမသုံးထားပါဘူး။
step 1 ... အနက်ရောင်အဝတ်စတစ်ခုကိုယူ၊ အပေါ်ဘက်၊အလယ်နဲ့ အောက်ဘက် ဟိုဘက်အစ၊ဒီဘက်အစနှစ်ဘက်မှာ
အဝတ်လှန်းတဲ့ဝါလုံးကို ကလစ်နဲ့ တွဲပြီးတော့နံရံမှာကပ်ထောင်တယ်။
( studio မှာမဟုတ်တော့လဲဒီလိုပဲကြံဖန်လုပ်ရတာပေါ့ဗျာ။
အနက်ရောင်အဝတ်စကို background လုပ်ရတာကတော့အလင်းဖေါက်တာကို
ပိုပြီးထင်ရှားစေမယ်လို့ ယူဆမိလို့ ပါ။ )
step2... camera ကို tripod နဲ့ ထောင်ပြီး setting လုပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့ setting ကတော့
M Mode မှာ Shutter speed က 5s ၊ Aperture က f/5 ၊ ISO က 400 ပါ။
step3... model ဖြစ်တဲ့သယ်ရင်းကိုအောင်ကို ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း နေခိုင်းပါတယ်။
ပြီးတော့ ... ကိုအောင်ရဲ့ ဘယ်ဘက်လက် ...
လက်ခလယ်နဲ့ လက်သူကြွယ်ကြားမှာ Led 1W
ဓါတ်မီးရဲ့ အလင်းရောင်ထွက်တဲ့ အဝကို ဆီပုံးနဲ့ ကပ်ထားပြီး၊ ဓါတ်မီးကို မီးဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
step4... ကိုအောင်ရဲ့ မျက်နှာကို focus ဖမ်းပါတယ်။ လိုခြင်တဲ့နေရာကို
focus ကို M သို့ ပြောင်းပြီး Lock လုပ်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ... အခန်းမီးကိုလုံးဝပိတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ ဘာဆိုဘာမှကိုမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။
ဘာအမျိုးအစား Flash ကိုမှလဲမသုံးထားပါဘူး။
step5... PS ( Photoshop ) မှာတင်လိုက်ပြီးအနောက်ကအဝတ်စအမဲ
နဲနဲတွန့် နေတာကို brush tool အဖွာလေးနဲ့ ဟိုတို့ ဒီတို့့လုပ်ပြီးပြန်ဖြေတယ်။
စမ်းကြည့်ပါ။ တစ်ကယ်ကို အဲ့ဒီ့အတိုင်းထွက်လာလိမ့်မယ်ဗျာ။
ကဲ ... သယ်ရင်းတို့ မှာလဲ၊ အချိန်တွေပေးခေါင်းတွေစား၊
ရှုရှုလုပ်ထားတဲ့ image လေးတွေရှိကြမှာပါ။
ဒီနေရာလေး မှာ share ကြရအောင်ဗျာ ... ။
လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးသမျှအလားတူ image တွေကို
ကြည့်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ...
ရေထဲမှာပြန်မြင်နေရတဲ့ အရောင်လေးတွေကိုသဘောကျမိလို့ ပါဗျာ။
Woodland မှာ Attap Valley Road ဆိုတာရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီ Attap Valley Road ပေါ်မှာAttap Valley Power Gas Station ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီ Station က instrument တွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ပတ်မှာတစ်ခါတော့
maintenance လုပ်ဖို့ သွားရလေ့ရှိပါတယ်။
GNight Johar 1,2နဲ့3 ကအဲ့ဒီ့ Station ရဲ့ အနောက်ဖက်ခြံစည်းရိုးကနေလှမ်းမြင်နေရတဲ့
Malaysia ဘက်ကမ်းက Johar Baru မြို့ ကလေးရဲ့Night View လေးပါ။
အဲ့ဒီ့ View လေးကိုမနက်နေထွက်တဲ့အချိန်ကိုလဲရှုရှုလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တေးတာပါတယ်ခင်ဗျာ။
GNight Johar 1
GNight Johar 2
GNight Johar 3